Ngaba Ngokwenene Ufuna ukusebenzela isiQalo? | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 8, 2009 NgeCawa, uJuni 21, 2015 Douglas Karr
Akukho nto imbi ngakumbi kwimvakalelo emathunjini akho kunangexa ukhutshwa emsebenzini. Ndanikwa i-boot ngokungathandabuzekiyo malunga neminyaka emi-6 eyadlulayo xa ndandisebenza kwiphephandaba lommandla. Kwakuyindawo ebalulekileyo ebomini bam nasemsebenzini. Kwafuneka ndithathe isigqibo sokuba ndiza kulwa na ndibuyele kwimpumelelo ephezulu - okanye nokuba ndiza kuhlala phantsi okanye hayi.
Xa ndijonga ngasemva, imeko yam ibinyanisile. Ndashiya ishishini elalisifa kwaye ndashiya inkampani eyaziwa ngoku njenge omnye wabaqeshi ababi kakhulu ukuba asebenzele yena.
Kwinkampani yokuqalisa, amathuba okuphumelela agciniwe ngokuchasene nawe. Iindleko zabasebenzi kunye nembuyekezo lolunye lolona tyalo mali lungenziwa yinkampani yokuqalisa. Abasebenzi abaphambili banokulinyusa ishishini, ukuqesha kakubi kungangcwaba.
Enye into eyenzekayo kwisiqalo esiphumeleleyo, nangona kunjalo. Abasebenzi ababemhle ngolunye usuku banokufuna ukukhululwa baye kolunye. Inkampani yabasebenzi abahlanu yahluke kakhulu kunenkampani ene-10, 25, 100, 400, njl.
Kule minyaka mithathu idlulileyo, ndisebenze kwisiqalo esi-3.
Isiqalo esinye sandigqitha… iinkqubo kunye namanqanaba olawulo andisokolisa kwaye kwafuneka ndihambe. Yayingelo tyala labo, inene yayikukuba andisenawo 'umlinganiso' kwinkampani. Baqhubeka nokusebenza kakuhle kwaye banentlonipho yam. Khange ndiphinde ndibekho.
Ukuqalisa okulandelayo kwandidinisa! Ndisebenze kumzi-mveliso ombi, ndenzela inkampani engenazixhobo. Ndanikela unyaka wam kwikhondo lomsebenzi wam ndawanika konke okwam - kodwa kwakungekho ndlela yakwenza ndiqhubeke nokugcina isantya.
Ndinokuqalisa ngoku ndiziva ndikhululekile. Simalunga nama-25 abasebenzi ngoku. Ndingathanda ukuchaza ngokuqinisekileyo ukuba iya kuba yinkampani endithatha umhlala-phantsi kuyo; nangona kunjalo, iingxaki zichasene nam! Xa sibetha amakhulu ambalwa abasebenzi, siza kubona ukuba ndikwazi njani ukumelana. Ngeli xesha, ndingundoqo kwimpumelelo yenkampani mhlawumbi ndinokuhlala 'ngaphezulu komlo' woburhulumente kwaye ndisebenze nzima ukugcina amandla kunye nenkqubela phambili ngokukhula okukhulu.
Abanye abantu banokucinga ukuba ukuqala ngumqeshi okhohlakeleyo ukuba banabasebenzi abaphezulu. Andikholelwa njalo… ukuqalisa ngaphandle kokungakhathali kundixhalabise ngakumbi. Kukho amanqanaba ebomini bokuqalisa asebenza ngesantya sombane xa kuthelekiswa nequmrhu elisekwe. Uya kunxiba abanye abasebenzi kwaye uya kuphuma ngaphezulu. Ngelishwa, ubungakanani babasebenzi bancinci kuqaliso ukuze amathuba akho okuhamba mva mancinci.
Oku kunokuvakala kungenangqondo, kodwa ndingathanda ukuqala isiqingatha sabasebenzi kunokuba siphulukane nayo yonke.
Ke… ukuba ngenene ufuna ukusebenzela ukuqalisa, gcina inethiwekhi yakho isondele kwaye ubeke kude imali ulungiselela. Funda kumava kangangoko unakho- unyaka onesiqalo esisempilweni unokukunika iminyaka elishumi yamava. Uninzi lwazo zonke, fumana ulusu olungqindilili.
Ngaba ndingathanda ukungasebenzeli ukuqala? Ewe… hayi. Uchulumanco, imiceli mngeni yemihla ngemihla, ukuyilwa kwemigaqo-nkqubo, ukukhula kwabasebenzi, ukufaka umthengi ophambili… la ngamava amangalisayo endingazange ndafuna ukuwanikezela!
Chonga into oyithandayo, ungothusi ukuba ukhathalelwe ukuya emnyango, kwaye uzilungiselele ukuhlasela elona thuba lilikhulu kunye namava axabisekileyo owakhayo.
Ngaba ukukhula kweTwitter kubalulekile?
Jan 8, 2009 kwi-2: 38 AM
Konke oku kuyinyani! Ndiyakwazi ngokuqinisekileyo ukungqina uninzi lwala manqaku, ukuqaliswa kunye nabasebenzi abayi-10 basebenza ngokwahlukileyo xa kukho impumelelo kunye nabasebenzi abayi-100, njl.
Enye into endiyiqapheleyo kukuba ukusebenzela abaqalayo abancinci kundimoshile! Andinakuze ndicinge ukuba ndibuyela kubomi bemihla ngemihla.
Jan 8, 2009 kwi-2: 56 AM
Iposti entle! Ndisebenze umsebenzi wam wonke wokuqalisa kwaye ndibhala amanqaku ebhlog yam malunga nokuqalisa.
Kukho iinyani ezimbalwa ezibandayo zelizwe lokuqala abo bacinga ngalo kufuneka bazi:
1. Ukusebenzela ukuqalisa ngumdlalo wokungcakaza EVEN ukuba ukwinqanaba leqabane / lomnini. Isikhohlakali esinye singonakalisa umbutho uphela. Ndibone uqalo oluninzi lusilela, kuba omnye umseki wenze isigqibo esiqhutywa yi-ego kuphela esonakalise inkampani ngokungenakulungiseka.
2. Imivuzo imalunga ne-40% ngaphantsi kwamanqanaba eenkampani ezinkulu. Izibonelelo azinakuthelekiswa (ixesha elininzi).
3. Amaxesha amaninzi, iiveki zomsebenzi zinde kakhulu kunezoshishino.
4. Amathuba okuba inkampani yakho iya kungena phantsi kwi-tenure yakho… malunga ne-60% (ixhomekeke ukuba ngubani owenze uphando ngamanani).
5. Kuya kufuneka uphambane, njenge ramen noodles, okanye ube nogcino olukuvumela ukuba ube sengozini.
Ndinemisebenzi ekhokelayo ekuqalisweni okukhule ukusuka kwi-20 ukuya kwi-100 abantu kwiminyaka eyi-2 (kwaye isakhula) enye enye ehamba ukusuka kwi-10-50 kwiinyanga ze-6 (baseshishini). Kodwa kwakhona kuye kwafuneka ndivale enye ndishiye enye, kuba ndiyazi ukuba baya kungena ngaphantsi (kwakhona). Ngaba uyakwazi ukumelana nokuguquguquka?
Ihlabathi lokuqalisa lelabo banesisu sayo kwaye bazimisele ukuba bhetyebhetye KAKHULU. Ukuba awukho, hlala ungekho.
Kufana neshishini lokutyela, yonke into entle / eyothando / entle evela ngaphandle, kodwa ESIHOGWENI ESIPHAMBILI ngaphakathi. Nabani na okuxelela ngenye indlela uphezulu, ugcwele uyazi ukuba yintoni, okanye usele i-koolaid kakhulu.
Jan 8, 2009 kwi-8: 58 AM
Apolinaras - enkosi kakhulu ngegalelo lakho koku. Bubomi obuchulumancisayo, ngokuqinisekileyo – ulutsha olukwimisebenzi yalo yokuqala kufuneka bawuqonde umahluko omkhulu.
Jan 8, 2009 kwi-3: 51 AM
Ndiyavumelana nombono wakho malunga nokuqalisa ngokubanzi. Kufuneka kuthiwe nangona kunjalo, amava onke ekuqaliseni asekelwe kwizakhono zobunkokeli zomseki (aba).
Ubunkokeli obuhlwempuzekileyo kunye nalo mba ungaphantsi kwezakhono zolawulo ngokubanzi zikhokelela kumava amabi ngelixa ubunkokeli obulungileyo kunye nesakhono solawulo esingaphezulu komndilili sinokwenza amava axabiseke nokuba ishishini liyaphumelela okanye liyasilela.
Jan 8, 2009 kwi-9: 03 AM
Andiqinisekanga ukuba amava 'aphelele' aphezu kwabaseki. Amaxesha amaninzi abaseki ngoosomashishini kunye nabantu abacingayo. Ngamanye amaxesha abaqeshwanga kakuhle, ekuthengisweni, ekuthengisweni, ekunyuseni imali, kwimisebenzi, njl.njl. Andiqondi ukuba unokutyhola bona ngokungabinazo zonke izakhono.
Abaqalisi banyanzelwa ukuba baphume kancinci kwaye benze utyalo-mali olukhulu kwitalente - umsebenzi othile, abanye ngokunyaniseka abenzi njalo. Njengoko i-Apolinaras isitsho, oko kunokuthatha inkampani yonke.
Abaseki benza okona kulungileyo ngento abanayo. Ngamanye amaxesha akwanelanga. Nantso ingozi yokuqalisa!
Jan 8, 2009 kwi-10: 01 AM
Inqaku elilungileyo! Kunye nezimvo ezilandelayo. Ndicinga ukuba ii-start-ups ziye zakhazimliswa kwaye zenziwa ukuba zibukeke zilula. Ukuba uyinyani kwaye uphuhlisa ngaphezu kweshishini lasekhaya, kunokuba buhlungu kakhulu. Xa usiya kusebenzela enye, kufuneka ulungele ukufumana amava aphakamileyo kunye naphantsi kunye nabanini.
Nangona unokucinga ukuba uyayiqonda loo nto, ude ube lapho...
Jan 8, 2009 kwi-11: 39 AM
Inqaku elihle kakhulu kwaye lifike ngexesha ngokunjalo. Bendicinga ngokuqhubekeka ukusuka xa ndikhoyo kuba andiqinisekanga ukuba yintoni ukukhula ebakho ngamanye amaxesha kum. Kukho izinto endifuna ukuzifunda kwaye andinakukwazi de kwaye ukuba sinokuthengisa umxhasi kuyo. Kungumceli mngeni xa usebenza neshishini le-HR.
Nangona kunjalo, i-opoprtunity endiyibonayo eyenza ukuba ndiyithathele ingqalelo ngakumbi yi-arhente yokuqalisa intengiso. Eli nqaku liza kundenza ndicinge izinto ngaphezulu kwezi nyanga zimbalwa zizayo kwaye ndibone ukuba iphi intliziyo yam.
NgoJanuwari 8, 2009 ngo-12:37 PM
Isithuba esihle. Indibangele ukuba ndibe nefuthe kwinkampani encinci endihlala kuyo - er, work - kuyo. Ayisiso isiqalo, kodwa sihlala sivela.
NgoJanuwari 8, 2009 ngo-5:22 PM
Ndaphumelela kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye ndazama ngokwenene ukuqeshwa kwiindawo ezininzi zokuqalisa. Ndikhe ndanengxaki. Ndandisoloko ndiziva ukuba izakhono zam kunye nokuziphatha kwam emsebenzini kuya kufaneleka kakhulu kwisiqalo. Ndiyathemba ukuba ndizakuqala enye okanye ndisebenzele enye kwindawo yam elandelayo, nanini na inokuba njalo.
NgoJanuwari 8, 2009 ngo-7:42 PM
Ndicinga ukuba ukusebenzela ukuqalisa kuya kuba kuhle. Kodwa ikwavela kuluvo lokuba ndifuna ukuba ngusomashishini kwaye ndiyakonwabela amahla-ndinyuka kunye nobomi obuphithizelayo. Yiloo nto endiyijonge phambili ekuqaliseni endingacingi ukuba uninzi lweenkampani ezinkulu zingandinika.
Nangona kunjalo ndiyabona ukuba le ndlela yokuphila ingafanelanga wonke umntu ngoko ixhomekeke kwinto oyikhangelayo kumsebenzi.
NgoJanuwari 8, 2009 ngo-8:07 PM
Isithuba esihle, njengesiqhelo.
Ndidla ngokuvumelana nawe, ngokubanzi.
Kodwa, ezinye iingongoma ezongezelelweyo zibandakanya:
1) Ngumtshato — ndiyanika, uyapha.
Ngamanye amaxesha oko kulahleka kwinguqulelo ekuqaleni. Ukhetho lwesitokhwe lunokuba ngamahandcuffs egolide aqinisekileyo koku, kodwa abaqalayo abakhupha iimali ezilinganayo ngamaxabiso aphakamileyo oqhankqalazo ngoko nangoko abanyanisekanga kubasebenzi babo, ngakumbi ngenxa yokuba imivuzo ekuqaleni iqhele ukubakho kumndilili wentengiso.
2) Ubuntu vs. Ukusebenza
Ngelishwa, amaxesha amaninzi aqalayo akhokelwa bubuntu kunye nokwenziwa kwezigqibo ezingaqhelekanga ezichaphazela ukuqeshwa kunye nokudubula. Unqwenela ukuba oku kuya kuba kusekwe kwintsebenzo
3) Ubunkokeli ngundoqo
Umrhwebi akufuneki abe nazo zonke izakhono, kodwa kufuneka abe nobulumko bokuphelisa iintsilelo zabo kwaye bamamele abantu ababangqongileyo ngendlela enentsingiselo.
4) Ukukhulisa umqeshwa
Oku kuvakala kukuhle ephepheni, kodwa ngokuqinisekileyo hayi kumqeshwa ongayiqondiyo indlela izakhono zabo ezingasigcini isantya, ngakumbi ukuba ubunkokeli kunye nabasebenzi basebancinci ngaphandle kwesakhono esipheleleyo-babeke ukuba bazikhusele ekubuzeni imibuzo, njengoko kuhlala kunjalo. imeko kwinkampani yokuqala.
5) Abantu bajonge #1
Iziphumo ezibi zenguqu ephezulu yabasebenzi engeyiyo ngokuzithandela ayilungile. Inkuthazo ngoloyiko ayinakuze ibe sempilweni. Abantu abangeni emisebenzini becinga ngomsebenzi wabo olandelayo, ke ukuba abahlobo bayawa i-resume iyalolwa.
Lilonke, kwakhona, ndiyavumelana noninzi lwento oyithethileyo, kodwa ndicinga ukuba ujonga oku ngeendondo ezirozi.
Iziqalo eziye zaphumelela kakhulu kwixesha langoku (i-Google) iphatha abasebenzi ngentlonipho, kungekhona njengezandla eziqeshwayo ukuba zisetyenziswe njengezixhobo zokuqonda.
Into endihlala ndibuyela kuyo kwiindawo zokuqalisa kubudlelwane- ukuba unokwakha ubudlelwane kunye nesiseko esiqhelekileyo kunye nobunkokeli bakho kuyafaneleka. Ukuba ubunkokeli bakho bukude, bu-standoffish, umnatha, usikiwe kwaye womile kwaye kukushiya ukrwela intloko xa unamava obunzima be-2 okanye 3X emva koko abayifumani kwaye bakhohliswa ngabo. ego siqu kunye nokungakhuseleki.
NgoJanuwari 8, 2009 ngo-8:08 PM
Ukuphela komehluko ocacileyo phakathi kwesiqalo kunye nenkampani esekiweyo lixesha lombutho.
Ngaphandle koko, ikhona inkampani inokufuna iiyure ezinde kubasebenzi, inikeze isidlo sasemini simahla, ibuyekeze abantu kakubi okanye yamkele imibono emitsha. Ukuqaliswa okuxhasiweyo kweVenture kunokuba nezigidi ebhankini, kwaye iinkampani ezineminyaka eli-100 ubudala zinokujongana nemiba yokuphuma kwemali. Abaphathi abakrelekrele nabakhohlakeleyo bazimele kuyo yonke indawo.
Ubudala benkampani akufuneki bukwazise izigqibo zakho zomsebenzi, kodwa inkcubeko kunye neenkolelo zabo bangaphakathi kulo mbutho. Sukubuza ukuba ngaba uyafuna okanye awufuni ukusebenzela ukuqalisa. Fumana ukuba zeziphi iimpawu ozifumana zinomtsalane kwiinkampani ezinomdla. Ungawuhoyi umhla wokufakwa kwaye ulandele amaphupha akho.
NgoJanuwari 8, 2009 ngo-10:39 PM
Ndiza kungavumi ngentlonipho, Robby.
Ubudala ayisiyiyo kuphela umahluko. Amaxesha amaninzi abaQalayo basebenza ngemali ebolekiweyo benemali enyiniweyo kunye nabasebenzi. Baphantsi koxinzelelo olukhulu ukuba bakhule kwaye bafikelele kwi-cashflow eqinisekileyo ngokukhawuleza okukhulu.
Inkcubeko kunye neenkolelo zogqweswe kakhulu kukusinda okumsulwa ekuqaleni kwenkampani. Jonga kuyo nayiphi na inkampani enkulu namhlanje enenkcubeko kunye neenkolelo ozifunayo kwaye ndingangcakaza kakhulu ukuba babengenawo loo mathuba xa babebotshelelwa imali, ematyaleni, kwaye bephendula kubatyali-mali abangxolayo!
Kukho abaxhasi abambalwa nabaxhasayo 'abaluhlaza' emsebenzini wam, kodwa asinayo nayiphi na inzuzo yokunceda ukutshintsha ihlabathi (okwangoku).
NgoJanuwari 9, 2009 ngo-7:21 PM
Iingxelo zakho zibonisa ithisisi yakho ephambili, endikholelwa ukuba kukwenza ibango lokuba kukho umsantsa omkhulu, osisiseko kunye nefuthe phakathi kwemibutho emincinci nemidala. Nangona kunjalo, ndiqaphela oku kulandelayo:
Ubhala ngeenkampani “ezisebenza ngemali ebolekiweyo ezinemali enyiniweyo kunye nabasebenzi. Baphantsi koxinzelelo olukhulu ukuba bakhule kwaye bafikelele kwimali ekhoyo ngokukhawuleza. ” Oku kuvakala njengenkcazo yee-automakers ezintathu ezinkulu, enye yamaziko amaninzi ebhanki asandul 'ukusilela, okanye ngokwenene ikhona inkampani etsala nzima. Ayiphelelanga nje kwiziqalo.
Ukwabeka ukuba "inkcubeko kunye neenkolelo zondliwe kakhulu kukusinda okunyulu ekuqaleni kwenkampani." Kodwa ngaba asikokusilela ukusinda koko kukukhuphileyo kwisigebenga seshishini lephephandaba? Uthetha ukuba ibiyindawo embi yokusebenza kodwa ibingenguwe oqale ukuphelisa.
Ekugqibeleni, inqaku lakho lesithathu libonakala linomxholo othi "ukunceda ukutshintsha ihlabathi" kufuna inzuzo. Kiva, IFreenet kwaye kunjalo GNU / Linux zonke ziqalo esele zixhamle ihlabathi, ngaphandle kokucinga kakhulu ngenzuzo yazo.
Eyam ingongoma yahlukile. Nangona kunokubakho ezinye iimpawu ezinxulumene kakhulu, umahluko kuphela oqinisekisiweyo phakathi kweenkampani zokuqalisa kunye nabaqeshi bemveli yiminyaka. Ndingacela umngeni kuye nabani na ocinga ngokulandela (okanye ukuphepha) umsebenzi ekuqaleni ukuba azibuze ukuba zeziphi iinkolelo malunga nobudala eziye zazisa iimbono zabo.
Andiqondi ukuba lo myalezo ngowokufunda okanye ngowokufunda. Xa uthatha isigqibo sokuba ufuna ukusebenza phi, iminyaka yenkampani yindawo engafanelekanga ukuqala. Kunoko, umntu ufanele acinge ngeshishini, imilinganiselo yokuziphatha, indlela yokuziphatha emsebenzini, inkcubeko yendawo yokusebenza, nobuntu babo udibana nabo kumbutho ngamnye.
Ukhetho olubi lweziqalo okanye amashishini emveli, ngokoluvo lwam, luhlobo lokucinga ngobudala. Njengabantu abafuna umsebenzi abacalulayo, sifanele sibavavanye abaqeshi ngokwemigaqo enentsingiselo. Oku akubandakanyi umhla wokufakwa.
NgoJanuwari 9, 2009 ngo-4:40 PM
Bendisebenzela ukuqalisa kwezi nyanga zi-5 zidlulileyo kwaye ndonwabele. Besibeka izixhobo zethu ezincinci kuyilo ngokutsha lwesiza kunye nokuphuculwa kweekhowudi. Luninzi uchulumanco kum ngekamva lonyaka ozayo njengoko kufanele kube njalo nakubantu abasaqalayo. Ndiyazi ukuba kuzakubakho umsebenzi omninzi ozayo kunye nokutyhala ngakumbi kwesi siza kwiinyanga ezi-6 ezizayo, kodwa ngethemba lokuba iya kuhlawula kwaye andiyi kunxiba. Ayingomntu wonke, kodwa andifuni msebenzi wesintu.